တရုတ် Qingdao ပုံမှစက် - ကိုနှစ်ချက် Layers ရေဗာ Retort မြုံ Steam
ရော်ဘာ EXTRUDER machine
ရော်ဘာ Cool machine
တုရုမြို့ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း & ပြန်ဖြစ်ရော်ဘာစက်ရုံဖြုန်း
ပလပ်စတစ် EXTRUDING machine
ပလပ်စတစ် Injection မှို machine
နှစ်ချက် Layers ရေဗာ Retort မြုံ Steam
သစ်သားသစ် Anticorrosive ကုသမှု Tank
ရော်ဘာထုတ်ကုန်များ Vulcanizing Tank
ရေဗာနို့ Pasterization စက်မှုတ်ဆေးဘူး
လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့အပူ Hot Air ကိုစားနပ်ရိက္ခာခြောက်သွေ့စက်
သုံး Pot စင်ပြိုင်အမျိုးအစားစားနပ်ရိက္ခာထုတ်ယူခြင်း Retort စက်
ပူပြင်းတဲ့ရေပြုတ် Tank စက်
အလိုအလျောက်ဆန်ဖက်ထုပ်ပြုတ် Pot စက်
သံမဏိစားနပ်ရိက္ခာထုတ်ယူခြင်းရေမှုတ်လိမ်း Steri ...
စည်သွတ်စားနပ်ရိက္ခာထုတ်ယူခြင်း Autoclave Retort မြုံက M ...
မြင့်မားသောဖိအားသံမဏိဝါယာကြိုး Hose ယက်လုပ်ခြင်းစက်
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 10000-25000
min ။ အမိန့်အရေအတွက်: တစ်ခုမှာသတ်မှတ်မည်
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 20 သတ်မှတ်ပေးသည်
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T, L ကို A / C, Western Union
အဆိုပါနှစ်ချက် Layers ရေဗာ Retort မြုံအစားအသောက်ထုတ်ကုန်တွေပိုးမွှားသတ်အသုံးပြုသည်ရေနွေးငွေ့။ ရေရေချိုးအမျိုးအစား, ရေမှုန်ရေမွှားအမျိုးအစားနှင့်ရေငွေ့ type ကိုအစားအစာအထုပ်အမျိုးအစားသည်နှင့်အညီရှေးခယျြမှုအဘို့ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်စက်ပိုးမွှားသတ်မှနှစ်ဆအကြံပေးအဖွဲ့ရေနွေးပြန်လည်ချမှတ်။ ဒါဟာမြုံအချိန်ကိုအတိုကောက်, အ sterilizing အပူချိန်ဖို့ပူအကြံပေးအဖွဲ့ရေ preheat ။ အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့ retort autoclave အပူချိန်ထုတ်ကုန်ရဲ့အရည်အသွေးကိုကာကွယ်ရန်, စတင်မြင့်မားသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖွင့်အကြံပေးအဖွဲ့မှ, ရေပူ recycle sterilizing ပြီးနောက်အလုပ်လုပ်အလတ်စားရေနွေးငွေ့, စွမ်းအင်, နှင့်အချိန် sterilizing ချွေတာ, အသုံးပြုမှုပြန်သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းလူအင်အားနဲ့ပစ္စည်း resources.The ကယ်တင်နှစ်ဆအလွှာရေနွေးငွေ့ရေရေချိုး retort မြုံ temperature is even, water flow is even, there’s no dead space in the tank.The water spraying autoclave machine adopts most advance computer control system in the world.The full progress is fully computer controlled by PLC, one time finish, no need man operation.The PLC can store more than 100 pcs sterilizing programme. The sterilizing is standardization.
မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် heat exchanger ချမှတ်ရုံအများအပြားမိနစ်ပိုးသတ်အပူချိန်ရနိုငျသညျ။
နှစ်ဆအလွှာရေရေချိုး retort ငွေ့ မြုံ ကြီးမားသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်ချမှတ်, ပြောင်းလဲနေသော display ကိုပု sterilizing စီးဆင်းမှု။
တိုင်းစက် valume ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ fo ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။
ခြင်း simulation အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, ပေါင်းစုံဇာတ်စင်အပူသတ်မှတ်နိုင်သည်။
နှစ်ဆအလွှာရေနွေးငွေ့ရေရေချိုး retort မြုံအပူအရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလွယ်ကူသည်, ပင်ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ချက်အလွှာပျော့အထုပ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ရေရေချိုး retort မြုံကောင်းသော, အထူးသဖြင့်ကြီးမားသောအထုပ်အဘို့, အပူထိုးဖောက်မှုမြန်နှုန်းအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်, ပိုးသတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းသောလျှင်။
ပက်ဖြန်းအဆိုပါသံမဏိအစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့ရေ ပိုးသတ်စက် print ထုတ်ခြင်းနှင့်စတိုးဆိုင်အချိန်, အပူချိန်, ဖိအားကွေးမြေပုံနိုင်ပါတယ်။
soft အထုပ်: လူမီနီယမ်သတ္တုပါးအိတ်မြင့်မားသောအပူချိန် retort အိတ်, လေဟာနယ်အိတ်, ပွင့်လင်းအိတ်
ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာ: PP ပုလင်း, စတင်ပုလင်း
ယခင်: သစ်သားသစ် Anticorrosive ကုသမှု Tank
mini ကိုအစားအစာ retort စက်
အိတ်ဆောင် Autoclave ဖိအားရေနွေးငွေ့မြုံ
သေးငယ်တဲ့ autoclave အစားအစာမြုံ
အသေး uht ပိုးသတ်စက်
ငါးစည်သွတ်စားနပ်ရိက္ခာပိုးသ Retort Steam
စည်သွတ်စားနပ်ရိက္ခာထုတ်ယူခြင်း Autoclave Retort Sterili ...
သုံး Pot စင်ပြိုင်အမျိုးအစားစားနပ်ရိက္ခာထုတ်ယူခြင်း Retort ...
အသားစားနပ်ရိက္ခာ Defrosted ပစ္စည်း
နေရပ်လိပ်စာ: # 935, Lingang စက်မှုဇုန်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86- (0) 532-85176125
ဖက်စ်: + 86- (0) 532-85176125